လူမှုလုပ်သားယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု / လူမှုလုပ်သားယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ယာကုပ် ဧပြီလ 12, 2016 ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု မှတ်ချက် Leave 968 views
လူမှုလုပ်သားတွေတစ်ဦးချင်းစီကူညီမှုအတွက်အားကိုးရှိပါတယ်, မိသားစုများ, လူအုပ်စုများသူတို့လူနာတွေကို '' ဘဝတွေကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ပြဿနာများနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲရန်. ဒီတစျခုအသှငျအပွငျကျွမ်းကျင်မှုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်သူတို့၏ဘဝများနှင့်အတွေ့အကြုံများလေမှမှီခိုအားထားလူနာတွေအတွက်ယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း - အခြားလူဟုအဘယ်သို့မှအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုပေးခြင်း, ဖန်ဆင်းခံရသည့်အချက်များကိုနားလည်ရန်အချိန်ယူ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းတွေမေး, နှင့်မသင့်လျော်အချိန်များတွင်ကြားဖြတ်မဟုတ်.
လူမှုပိုင်းခြားသိမြင် - အခြားသူများ '' တုံ့ပြန်မှုသတိထားဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့လုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့တုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့နားလည်ခြင်း.
စကားပြောသော - ထိရောက်စွာသတင်းအချက်အလက်သိရှိစေရန်အခြားသူများ Talking.
critical အတွေးအခေါ် - အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းအသုံးပြုခြင်း, ပြဿနာများကောက်ချက်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
ညှိနှိုင်းရေး - အခြားသူများ '' လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ.
Reading နားလညျမှု - အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏စာကြောင်းများနှင့်အပိုဒ်ကိုနားလည်ခြင်း.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန် - ကျကွှစှာကလူကိုကူညီမယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေ.
အရေးအသား - ပရိသတ်ကိုများ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အဖြစ်သင့်လျော်သောအရေးအသားအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ခြင်း.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း - ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ် options နဲ့ဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်သုံးသပ်.
တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း - အရှိဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အလားအလာလုပ်ရပ်များ၏ဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်စဉ်းစား.
လူနာ '' ဆေးဘက်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့နဲ့ client ကိုလိုအပ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ဖို့နဲ့အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်.
အကျပ်အတည်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန် clients များသို့မဟုတ်လူနာတွေအတွက်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ.
လူနာရည်ညွှန်းကိုးကား, ဖောက်သည်, အသိုင်းအဝိုင်းဥစ္စာရန်သို့မဟုတ်မိသားစုစိတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းကနေပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အထောက်အကူပြုရန်နှင့်ဤကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးအကူအညီအဖြစ်န်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး, ဥပဒေရေးရာအကူအညီ, အိမ်ရာ, အလုပ်နေရာချထားသို့မဟုတ်ပညာရေး.
သူတို့ကိုမှီခိုအနိုင်ယူကူညီရန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုတစ်စုအစည်းအဝေးများအတွက်အကွံဉာဏျ client နှင့်လူနာ, အနာမှထမြောက်, အသက်ရှင်ခြင်းမှ adjust.
စောငျ့ရှောကျ, ခန့်မှန်း, ကုသမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားတိုင်းတာရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီများနှင့်စံချိန်ကို client တိုးတက်မှုကို.
အင်တာဗျူးနှင့်လူနာမှတ်တမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်မှတဆင့် client ကိုသို့မဟုတ်လူနာတိုးတက်မှုမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဆီးအတားကိုဖေါ်ထုတ်.
နားလည်မှုအတွက်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ထောက်ခံမှုအုပ်စုများသို့မဟုတ်ဆုံးမစကားကိုမိသားစုဝင်များ Systematize, နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျ, နှင့် client ကိုသို့မဟုတ်လူနာ supporting.
လွန်ခဲ့သော SR. Network မှ Analyst, ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ
နောက်တစ်ခု traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ